पूर्व सांसद अफिलाल ओखेडाको छोरा बेपत्ता ! खाेज्न सक्दाे सेयर गराै ! « Khabar24Nepal
पूर्व सांसद अफिलाल ओखेडाको छोरा बेपत्ता ! खाेज्न सक्दाे सेयर गराै !
काठमाडौं ।पूर्व सांसद अफिलाल ओखेडाको छोरा सागर शर्मा (ओखेडा) विगत १४ दिनदेखि बेपत्ता छन् ।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित रत्नराज्य स्कुलबाट १६ वर्षीय सागर फेला नपरेको भन्दै पूर्व सांसद ओखेडा दिनहुँजसो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध महाशाखामा धाइरहेका छन् । तर, प्रहरीले उनको छोरा कता हराए भन्नेबारे पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
त्यसपछि फोन अफ गरेर हिँडेका सागर परिवारको सम्पर्कमा गएका छैनन् । प्रहरीले खोजी जारी राखेपनि उनी फेला पर्न नसकेको बताइएको छ । सागरले चलाउँदै आएको मोवाइल विगत १४ दिनदेखि बन्द छ ।-रातोपाटी
नापी कार्यालय भक्तपुरका सर्भेक्षक सिद्धराज जोशी घुस रकम सहित पक्राउ